Abahle kasilika obucayi lace jumpsuit isisindo umane wadala ukugcizelela ifomu besifazane bendawo. Zonke amantombazane abathanda enhle Lingerie, negligees futhi nightie - kuyiqiniso. Futhi njengoba ngaso sonke isikhathi okwenzekayo othandweni lweqiniso, akuyona ngaphandle nobunzima. Ukubheka izindleko izimpahla ezikahle, ngezinye izikhathi uye waqaphela ukuthi kulula ukuba zithande kude. Futhi akukho mqondo ukuqagula ukuthi zibiza buyafaneleka. Kungcono kakhulu ukuba sibheke ngayo indida ukudweba isifaniso nge uthando unrequited futhi wenze uthando ngezandla zabo. Yebo, ungenza nightgown akho njenge esitolo, ngiphakamisa Indwangu efanayo lace. Kodwa uma uthemba ngokuphelele umcabango, ungakha into eyingqayizivele.
Yokungabi nokuhlangenwe nakho - hhayi isithiyo
Indlela thunga nightgown ngaphandle kokuba nakancane kuphi ukuqala? Kungaba unesifiso, futhi okuhlangenwe nakho - kuyofika isikhathi! Yiqiniso, lapho ngeke akwenze ngaphandle a ukuhamba. Kodwa ngaphambi kokuthi ungaqhubeka engxenyeni esisebenzayo, umbono omncane jikelele awukwazi ubuhlungu.
Lapho ekhetha Indwangu, okuthandayo kumele inikezwe elicolekileyo. Habib nightie sihle, kodwa satin isabelomali crepe asifanele kubo. Yebo, ngaphandle nibonakala kubukeka lemukelekako, ngisho shimmers efana satin, kodwa iwebhu Friend too futhi uyobheka olugubhayo umkhiqizo. Inketho ekahle - kuba usilika, yemvelo noma emishinini. Ungase futhi sithathe satin ezicashile, chiffon noma intambo. No kancane ezithakazelisayo uyobheka inhlanganisela ezahlukene ukwakheka izindwangu. Isibonelo esikhulu - a nightie kasilika lace.
Thatha izilinganiso yakho lesi sibalo ngokuba evumelanisa noma yimuphi umkhiqizo uma kunesidingo, njengoba isibonelo izicathulo ngaphambi uyithenga. ithrekhi Siqu kusukela isithembiso ukwenza nightie iphethini "by iso" ngeke zisebenze. Ngakho-ke, esebenzisa telunyawo nemingcele ezifana:
isixazululo abese eyishutheka webele;
Ubude emuva forehand ukuba nokhalo;
Lezi izilinganiso asetshenziselwa ukwakha iphethini isizinda. Nochnushku abalingisa isifanekiso, ukusebenzisa imigqa okwenyanga on the Umdwebo. Lapha kungenzeka ukucabangela zonke ifaka zokuhlobisa futhi draperies obucayi, umngcele ukusika esifubeni, neckline futhi ukukhomba iphuzu lokunamathelisa emaphethelweni lace. iphethini isizinda futhi kulula ulinganise ubude obuyizinkulungwane ezizibeni. Kuyinto kakhulu elula ezingaphezu kuka vymeryat tape yabo bakala sibalo. Ngakho-ke, ukwenza nightgown njengoba kufanele, kudingeka uthathe zonke izakhi kanye yonke imininingwane ukudweba isifanekiso isizinda.
Basic isifanekiso anezikhala
Ukuze ufaneleke iphethini hhayi myalas futhi lunging ngakwesokunene, kungcono ukukwenza kusukela ukwakhiwa ifilimu. Kubita penny, bathengisa ngasiphi zokwakha esitolo. Dweba-ke okungcono umaka unomphela.
Okokuqala, ukwakha yegridi eyisisekelo, bese udvweba izinto ukusika.
Qala drawing nge ukwakhiwa engela kwesokudla, lapho mpo - ubude umkhiqizo, kanye ovundlile - ". Ivolumu kwebele" kwesigamu izilinganiso,
Engela eduze isikwele.
Upper ovundlile wahlukaniswa ngamaqembu amagatsha amathathu: spin - ½ izilinganiso "ububanzi emuva"; armhole - kwesigamu esifubeni selilonke uhlukaniswa kane 2 + cm; Amabele - ngaphandle ukubala.
Kusukela maphakathi endaweni armhole bachitha mpo elisizayo, ezizosebenza njengesiqondiso ukuze umphetho ohlangothini.
Ngokusho esilinganisweni "ukuphakama esifubeni", ukwakha isikhundla. Lokhu kuyoba umngcele webele.
Kusukela amaphuzu belinganisa zone emuva ngaphambi armhole lehliselwa perpendiculars kuya ovundlile wesibili umdvwebo.
Kusukela ekhoneni phezulu kwesokunxele konxantathu zehliswa ngumuntu ibanga elilinganayo esilinganisweni "Yenza isipele obuphelele okhalweni." Futhi wenziwa perpendicular mpo asizayo.
izenzo ezifanayo kukhiqizwa kusuka ekhoneni eliphezulu kwesokudla konxantathu, usebenzisa ukubaluleka izilinganiso "obuphelele phambi forehand okhalweni". Futhi perpendicular.
Imigqa okuholela kokuxhuma ijika mnene, okwenza kube ohlangothini kwesokudla isikwele. Lokhu kuyoba umngcele okhalweni. I emikhulu kwezifuba, ephansi kuyoba phezu panel phambi.
20 cm ngezansi okhalweni ngu umugqa hip.
Isifanekiso net Basic ngomumo.
Isiwombe sesibili ukwakhiwa iphethini - kwencazelo imicibisholo esifubeni, obumba umphetho ohlangothini kanye yokuqedela imininingwane.
Ngu webele umugqa ukusuka kwesokudla mpo ukubohla izilinganiso 1/2 "isixazululo webele abese eyishutheka" futhi kusukela iphuzu phezulu perpendicular ngokukhishwa.
Okulandelayo kuthiwa amaphuzu amabili, eyodwa isendaweni umugqa umngcele forehand armhole 5 cm ngezansi ovundlile engenhla; eyesibili ihloselwe 7 cm kusuka kwesokudla kuya kwesokunxele ekhoneni elingaphezulu unxantathu futhi 2 cm ngenhla ovundlile phezulu. Khomba yokuxhuma umugqa.
Okulandelayo lungisa esifubeni tuck. Ukuze wenze lokhu, kusukela empambana emgqeni esanda wabeka futhi perpendicular amvusa iphuzu kokuqala "1/2 isixazululo abese eyishutheka esifubeni," kokuya 3-4 cm, kanye line sehliselwe endaweni yokuqala.
Ukuze ukwakheka ohlangothini omhlophe nezinkalo le verticals kwesokunxele nakwesokudla izilinganiso abekwa ku 1/2 "hip girth" + 2 cm ngokukhululekile kufanelekile. Ngaphezu kwalokho, ngokusebenzisa leli phuzu kusukela phakathi armhole phansi umkhiqizo ukudweba umugqa oqondile noma kusontwe ngesikhathi umphetho okhalweni ohlangothini.
Kulesi sigaba, ukulungele ababethi iphethini izingxenye. Ibhizinisi amancane: ukudweba neckline nasesifubeni ukuwuthukulula.
Indlela thunga nightgown ukuthi wayeyinono futhi lutho ekhashelwa ukuthi kwakungakabi ifektri umkhiqizo? Okokuqala, ngaphambi ngiphakamisa izingxenye umphetho umshini, ngokuqinisekile kudingeka baste. Izigaba ohlangothini ezikahle ukuvala umphetho lelineni hhayi ukusebenzisa "Zig-Zag". Kungakuhle kube serger. Ngaphambi nastrachivat lace onqenqemeni izigaba lendwangu kudingeka neaten noma tuck. Tincenye lace at kangcono kuqala thunga ngesandla, bese topstitch ezivuzayo "Zig-Zag" nge ububanzi ezincane kanye iphimbo isilinganiso.
Indlela yokwenza ingubo aphume iphepha lukathayela: Master Class
I-Graphene nokusetshenziswa kwayo. Ukutholakala kwe-graphene. I-nanotechnology e-Modern World